Raha mbola teo mantsy Ratsimandrava - Book News Madagascar
« Tsy hiamboho adidy aho mon Général ! » Izay teny izay no tena ahafantarantsika ny kolonely Ratsimandrava. Teny milaza fahavononana, tsy fihemorana manoloana ny ady sarotra. Teny tokony ho filamatra nefa zary lasa fanesoana satria 7 andro tao aorian’ny nilokalokany sy nandraisany ny fitondrana dia najedak’ireo tsimatahotody ilay sahy maty.
Décoration de Ratsimandrava.
cc: Rob’art Photo
Sahy maty izy satria tsy nihambahamba nitondra fiovana. Tsy nisalasala nanongana ny rafitra nolovaina tamin’ny fanjanahantany ka niezaka nanangana ny rafitra mifototra amin’ny maha-Malagasy dia ny FOKONOLONA. Efa tsinjony ihany angamba fa ho be ny mpankahala azy satria nolazainy matetika tamin’ireny kabariny ireny izany. Tsy nanakana azy hanamaivana ny fiambenana azy anefa izany satria hoy izy hoe « amin’izao fotoana izao, ny tena fahavalontsika dia ny fahantrana ».
Sahy maty izy satria ny hahasoa ny Malagasy no nokendreny mialoha ny tombontsoan’ny tenany sy ny an’ny vahiny. Ny rafi-pitondrana napetrak’ireo mpanjanaka mantsy dia tsy nikatsaka afa-tsy ny ho azy ireo ihany, na tamin’ny lafiny ara-politika na tamin’ny lafiny ara-toekarena. Nandritra ny fanjanahantany, ny filoha frantsay no faratampony, fa izay napetraka teto dia solontenany sy mpanatanteraka baiko fotsiny. Ny amin’ny ekonomia indray, izay vokatra nilain’ireo mpanjanaka no nasainy nambolena teto amintsika, avy eo aondrana mankany aminy. Ny foto-drafitrasa toy ny lalana aza moa, izay ahatontosa io tanjony amin’ny famokarana io ihany no nokondreny najoro. Ireo toe-javatra ireo no nezahin-dRatsimandrava novaina sy nialàna mba ho tonga amin’ny FAHALEOVANTENA tanteraka i Madagasikara.
Sahy maty izy, nefa tsy tsaratsara kokoa ho an’ny firenena ve raha mbola teo izy ! Tsy naleo ve mba nipiripirina sy nanatanteraka izay nangatahina taminy izy dia toy izay mba velona ihany ! Raha izany anefa no nataony dia tsy ho nisy nifofo ny ainy fa navelan-dry zalahy nigalabona teo ihany izy satria tsy manelingelina ny tombontsoany, toy ny efa fanaon’ny sasany sy mbola tohizan’ny mpitondra hatramin’izao.
Tonga ary ity ilay andro anehoantsika Malagasy ny safidintsika. Iza no hofidiko ? Zovy no omeko ny vatoko ? Ilay milokaloka fa tsy hiankin-doha amin’ny mpamatsy vola mahazatra, banky iraisam-pirenena sy ny FMI, nefa vao nanomboka nilaza ny firotsahany ho filoha aza izy dia tsy teto an-tanindrazana akory fa tany Frantsa, teo anoloan’ireo vahiny mpampiasa vola maro be. Izy ve ? Ilay mampiankin-doha ny vahoaka madinika amin’ny alalan’izao zavatra « mora » isan-karazany izao ka mahatonga ny sarambabem-bahoaka ho toy ny « zazabe minono », tsy mahasaraka sy tsy te-hikaroka avy eo. Izy ve sa ilay iray ? Ilay mihambo fa mahay mifanaraka tsara amin’ny amerikanina sy ny rafitra apetrany ka hahazo famatsiam-bola mora foana. Ilay milaza fa hampihatra ny tena fitsinjaram-pahefana araka ny angatahin’ny vondrona eoropeana nefa sady milokaloka ny hanana fiandrianam-pirenena mijoro tsara sy fanjakana matanjaka ? Izy ve ?
… Raha mbola teo mantsy Ratsimandrava ! Izy no nofidiko ! Tsy hampiverina azy efa lasana anefa izany ! Saingy, « Ny volamena latsaka am-bovoka tsy avelan’ny soa tsy hihiratra » hoy ny ohabolan-drazantsika. Maty ho an’ny TANINDRAZANA izay nomatimatesany izy. Ny foto-kevitra najorony no aoka hotohizana mba tsy ho very maina ny ezaka nataony. Ny finiavana sy fahasahiana nananany no aoka ho alaina tahaka mba tsy ho voakosoka eo amin’ny tantara ny anarany.
« Raha miteny isika hoe “ho ela velona ny Tanindrazana !” Inona no dikan’izany ? Ity tany ity ve no ho ela velona ? Io anie efa teo hatry ny ela ary tsy hihetsika eo io… fa ny maha-ela velona ny Tanindrazana, dia satria misy fara aman-dimby, solofo dimbin’ny ala ao, izay ho velona soa aman-tsara amin’ilay tanindrazana, hanome voninahitra ny razany nipoirany noho ny asa tsara izay nataony. » P 19 ao amin’ny « Ny fokonolona araka ireo kabary nataon’ny kôlônely Richard RATSIMANDRAVA eran’ny Nosy 1973 – 1975 » – Baigan’Ambozontany – Fianarantsoa.